अमेरिकामा संगठन विस्तार नभएसम्म काठमाण्डुका नेताहरुले NRN अभियानलाई गम्भीरतापुरबक लिएन। तर अहिले जुन Mission Accomplished को प्रचारबाजी गरिँदैछ त्यो misleading छ। राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता भनेको के? NRN हरुलाई कमैया बनाएको हो? नागरिकता भनेको दुई किसिमको हुनै सक्दैन। NRN को dual citizenship को माग पुरा भएको छैन, ज्युँका त्यूँ कायमै छ।
dual citizenship Nepal nepali diaspora Non Resident Nepali Non Resident Nepali Association NRN usa